Ciidamada DF iyo AMISOM oo isku fidiyay deegaanno Hoostaga Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada DF iyo AMISOM oo isku fidiyay deegaanno Hoostaga Galgaduud
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Midowga Africa ee AMISOM ayaa isku fidiyay deegaanno iyo degmooyin ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Taliyaah Ciidamada dowladda ee Gobolka Galgaduud Max’ed Kaariye Dhega Dheeereoo warbaahinta la hadlay ayaa tibaaxay in ay wadaan is ballaaran ayna haatan Ciidamo fara badan geeyeen deegaanno kala duwan.
“ waxaan ku sheegi karaa in meelaha aan gaarnay ay si nabad ah uga huleelen nabadiidka , kuwa kalana ee ay ku sugan yihiinna aan ku sii socono” ayuu taliyuhu hadalkiisa sii raaciyay.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa dagaallo iyo duqeymo waxa ay ka dhacayeen Gobolka Galgaduud gaar ahan deegaannada Gobolkaas ay kaga sugan yihiin dhaq dhaqaaqa Ururka Al Shabaab.
Banaanbax lagu taageerayay dhismaha maamulka gobolada Sh/dhexe iyo Hiiraan oo ka dhacay Jowhar